आलमलाई पार्टीको झण्डा ओडाएर अन्तिम श्रद्धाञ्जली - Naya Pusta
आलमलाई पार्टीको झण्डा ओडाएर अन्तिम श्रद्धाञ्जली
Naya Pusta २०७५ असार ३० गते प्रकाशित
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका नेता तथा पूर्वस्वास्थ्य राज्यमन्त्री मोहम्मद मुस्ताक आलमलाई प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अन्तिम श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका छन् ।
५३ वर्षीय आलमलाई बिहीबार गृह जिल्ला रौतहटमा बेला हृदयाघात भएपछि उपचारका लागि बाँसबारीस्थित शहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय रोग अस्पतालमा ल्याइएको थियो । उपचारको क्रममा अस्पतालमै शुक्रबार आलमको निधन भएको थियो ।
शुक्रबार बिहान मात्र आलमको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अस्पताल पुगेका थिए ।
श्रद्धाञ्जलीका लागि आलमको पार्थिव शरीरलाई शनिबार विहान ८ बजेदेखि १० बजेसम्म पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा राखिएको छ।
यो पनि पढ्नुहोस् : पशुपति शर्माको गीतले संसद बैठकमा जुहारी, शर्मालाई पुरस्कारको ओईरो !
पार्टी एकता एकातिर, प्रचण्ड पोखरातिर !
पूर्वाञ्चलका ७ सय ९२ मतदानस्थल समवेदनशीलको घेरामा